ठेकेदारको ढिलासुस्तीले कोशीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएन - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश १ ∕ ठेकेदारको ढिलासुस्तीले कोशीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएन
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले कोशीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएन
अनिल श्रेष्ठ बिहीबार, २०७८ जेठ १३ गते, १०:५२ मा प्रकाशित
विराटनगर–ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीको कारणले विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडानमा ढिलाइ भएको छ । गम्भीर लक्षण भएका कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन आवश्यक भइरहेका बेला कोशी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न ठेकेदारले ढिलाइ गरेको हो ।
नेपाली चिकित्सकहरूको संस्था अमेरिका–नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको १ करोड ७ लाख रुपैयाँ सहयोगमा काठमाडौंस्थित डाइनोक्यामले ठेक्का पाएको छ । ठेक्का पाएर काम सुरू गरेको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म प्लान्ट जडान हुन सकेको छैन ।
अक्सिजन प्लान्टको लागि कोशी अस्पताल परिसरभित्र संरचना बनिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले तेस्रो मुलुकदेखि उपकरण ल्याउन ढिलाइ गरेको कारणले प्लान्ट जडानमा ढिलाइ भएको हो । मंसिरमा सम्झौता भएर २५ वैशाखभित्र कोशी अस्पतालमा अक्सिजन जडान गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिदा पनि अहिलेसम्म अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएको छैन ।
हाल संक्रमित बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा अस्पताल प्रशासनलाई अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको छ । दैनिक ३० देखि ३५ जना संक्रमित भर्ना भइरहेकामा एक बिरामीलाई कम्तीमा २ देखि ३ सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ । दैनिक कम्तीमा १ सय सिलिन्डर खपत हुनुका साथै थप त्यति नै संख्यामा जगेडामा राख्नुपर्ने कोशी अस्पतालका मेसु डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार संक्रमितकै उपचारमा दैनिक ठूलो संख्यामा अक्सिजन सिलिन्डरको आवश्यकता परेको बताए । यसबाहेक अन्य गम्भीर बिरामीलाई पनि अक्सिजनको आवश्यकता पर्दा व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । आफ्नै प्लान्ट भए यो झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने उनले बताए । अहिले अस्पतालले निजी उद्योगसँग सम्झौता गरेर अक्सिजन खरिद गर्दै आएको छ ।
कोशी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. दिपक सिग्देलले अक्सिजन प्लान्ट जडान नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘अहिले अस्पतालमा अक्सिजनको चरम आवश्यकता छ । यस्तै समस्या नहोस् भनेर चिकित्सकहरूको संस्थाले १ करोड ७ लाख रूपैयाँ पनि दिइसकेको छ । रकम निकास भएपछि चाँडै काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।’
अहिले संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परिरहेकोले चाडो प्लान्ट जडान गरिदिन हामीले भन्दै आएको उनले बताए । कोशीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएपछि दैनिक ३ सय सिलिण्डर उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । ३ सय सिलिण्डर दैनिक उत्पादन हुँदा कोशी कोभिड युनिटमा भर्ना भएका संक्रमितको उपचारमा सहज हुने अस्पतालले जनाएको छ ।
कोशीमा अक्सिजन प्लान जडानको ठेक्का पाएको डाइनोक्यामका एमडी विज्ञान अर्यालयले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उपकरण कलकत्ता आइपुगेको थप केही दिन समय लाग्ने बताए । ‘अक्सिजन उत्पादन गर्ने उपकरण स्लोभाकिया भन्ने देशबाट आउन नै समय लाग्यो । अहिले भारतको कलकत्ता आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलोमा एक साता भित्रमा कोशीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भइसक्छ ।’